Yenza i-3D Meme nge-LucidPix - Indlela Yokuqondisa
Ungayenza kanjani i-3D Meme Nge-LucidPix
Ama-Memes asevele angenye yezinto ezisungulwa kakhulu zesikhathi sethu. Lezi zidalwa zesithombe ezilula nezombhalo ziqinisa ama-nugget wesikhashana wesiko le-pop abe yimemori ephelele ye-inthanethi, zidala ukungabaza okuhlanganyelwe phakathi kwabo bonke abababonayo.
Ngenkathi ama-memes aqala ngesithombe esilula nefomethi yesihloko, avele ngokuhamba kwesikhathi, engeza opopayi ngama-GIFs kanye namavidiyo amafushane ngesinye isikhathi. Namuhla, lokhu kuqubuka kwemvelo okuqhubekayo kuthatha isinyathelo esilandelayo neLucidPix kanye nekhono layo lokuguqulwa kwe-3D. Azisekho ama-memes, amaflethi, asekhona, noma amile ngokwemvelo, i-meme yeLucidPix iphendula ukunyakaza kombukeli, ingeza isici esisha sobumnandi kulezi zingxenye ze-ephemeral zesiko le-inthanethi.
Isinyathelo 1: Thola iMeme yakho
Ingxenye enkulu mayelana meme yeLucidPix ukuthi akudingeki uqale ekuqaleni. Noma, uma unokuthile okuhle engqondweni, ungakha i-meme yakho entsha imgflip.com or makeameme.org, noma ngisho memebetter.com. Akunandaba ukuthi uqala kanjani, gcina isithombe sakho kukholi yakho yekhamera ye-iPhone noma ye-Android.
Ukusiza ukumaka unyaka omusha, sikhethe i-meme mayelana nokuntuleka kwethu kwezimoto ezindizayo:
Isinyathelo 2: Faka isikhala esithile
Ngenkathi ungakwazi ukweqa lesi sinyathelo, ama-memes ajwayela ukufundeka uma unendawo ethile ngasendabeni. Lokhu kungenxa yokuthi ingxenye yezithombe ze-3D ifihlwe uze uhambise ifoni yakho ukukhombisa umphumela we-3D. Ngaphandle kwendawo encane eyengeziwe ngokuzungeza isifundo, eminye imibhalo ye-meme inganqunywa noma kube nzima ukuyifunda.
Ngisebenzise uhlelo lokusebenza olubizwa ngokuthi I-Juxtaposer ukufeza lo mphumela, okuyi-iOS kuphela. Kodwa-ke, ngiyisebenzise ngesizathu esilula sokuthi bengivele ngiyithengile eminyakeni edlule. Uma ungenasifiso sokuthenga uhlelo lokusebenza olusha, kunezindlela zamahhala zezindlela zokwenzela I-Android ne-iPhone kulesi sixhumanisi.
Ukuze unikeze i-meme yakho isikhala esengeziwe esiseduze izinhlangothi, udinga isizinda. Ungaya Pexels.com bese ulanda isithombe mahhala, noma ungakha ubuciko obuncane. Nge-meme yami, ngangifuna okuthile ngesihloko sesikhala, ngahamba nesithombe esilandelayo engisithole ku-inthanethi.
Okulandelayo, ngangeze ukuthi njengesithombe sangemuva esikuJuxtaposer, kanye ne-meme engiyikhethile njengengaphambili, ngiqinisekisa ukusebenzisa iminwe emibili ukusipina / ukusondeza isithombe phansi ngosayizi ngakho kwakukhona uzimele omuhle osizungezile. Uhlaka kufanele lube cishe ngu-15-20% likhulu kunesithombe se-meme ngemiphumela emihle. Ngemuva kwalokho ngivele ngagcina i-meme ephumelelayo efakwe kwifoni yami.
Isinyathelo 3: Guqula ku-3D eLucidPix
Nakhu lapho kwenzeka khona umlingo. I-LucidPix izothatha isithombe sakho esisicaba, esisamemethekile futhi idale i-meme exhumanayo, enobukhulu obuningi eqinisekile ukuletha ukuthandwa nokuphawula.
Okokuqala, vula iLucidPix bese uthinta isithonjana sekhamera . Bese uswayipha kwesobunxele, nge-3D Uzimele nesithombe se-3D ukukhetha ukuguqulwa kwe-3D. Uzocelwa ukuba ukhethe isithombe ongathanda ukusiguqula sibe yi-3D, futhi kulokhu, yi-meme osanda kuyisindisa. Khetha isithombe, thinta Qalisa isithombe se-3D futhi vumela uLucidPix enze umlingo wayo.
Ngemuva kwenqubo yokuguqula, ihlole ngokuhambisa ifoni yakho kancane ukubona ukuthi umphumela ubukeka kanjani, futhi uma ujabule, thepha inkinobho yokwabelana futhi uyithumele ku-Facebook, noma uyihambise njenge-GIF noma ividiyo ezosetshenziswa ku-Snapchat , I-Instagram, iTikTok nokuningi.
Uma udinga usizo lokuthi ungahlanganyela kanjani, unenhlanhla! Sine iposi lebhulogi lichaza lokho ngqo lapha.
Uyayijabulela Memes yeLucidPix?
Uma uthanda Memes LucidPix, sazise! Uma sizwa kubantu abanele, singakha le nqubo kuhlelo lokusebenza lweLucidPix, ekudalweni okulula kwe-meme 3D.
Ungaguquguqula kanjani izithombe ezijwayelekile kwi-3D →← Ungayifaka Kanjani i-LucidPix Beta